Ogaden News Agency (ONA) – Mashaqada ka dhacday Muqdishu iyo cadawga Somaliyeed
Mashaqada ka dhacday Muqdishu iyo cadawga Somaliyeed
Waxay ahayd dhacdo aad looga murugoodo mashaqada ka dhacday Xamar shalay ee tobanaanka qof een waxba galabsan ay qaarna ku dhinteen qaar kaloo badanna ku waayeen qaybo ka mid ah jidhkooda. Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya waxay cambaareynaysaa fal-dambiyeedkaa, waxayna ugu baaqaysaa shacabka Somaliyeed inay u midoobaan cadawgooda dibadda iyo midka u adeegaya ee gudaha u fadhiya ee fulinaya dambiyada uusan ka raali noqon karin Ilaahay iyo diintiisa qof xeerinaya.
Hadaan ka soo qaadno in kooxaha ka dhex muuqda Somaliya ee ku dagaalamaya ha ahaadeen xukuumadda Sh Shariif oo ka soo faliidhantay Maxakamadaha ama Shabaabka ama kuwa leh waxaa nahay Sunna Wal Jamaaca (SWJ) hadaan ka soo qaadno inay yihiin kooxo diineed oo mid walba leh anagaa islaamnimadii haysana, maxaa u diiday hadday dagaalamayaan xataa inay ku dhaqmaan dardaadarankii Rasuulka CS ee ku salaysanaa akhlaaqda dagaalka? Rasuulka CS miyaanu ka dardaamin in aan la dilin xubnaha mujtamaca een dagaalka ku jirin sida dumarka, caruurta, kuwan diinta u go’ay, xataa beeralayda.
ففي حديث للرسول(ص) يقول: (لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة
Shaki kuma jiro kooxahan ku dagaalamaya Somaliya inay akhriyeen axaadiithta Rasuulka CS ee arimahaa ku saabsan, hasa ahaatee ujeedo aan diin iyo dal toona shaqa ku lahayn ayaa Somaliya ka socota, wayna ogsoon yihiin inay arintu sidaa tahay. Hasa ahaatee kooxahan iska soo horjeeda ee midwalba leh anigaa islaamka matala waxay la mid noqdeen kuwuu Ilaahay ku tilmaamay dameer kutubo xambaarsan (كمثل الحمار يحمل أسفارا) , waxayna u raran yihiin cadawgii umadda Somaliyeed.
Dagaal haduu joogsan waayo waxaa la baadhaa cidda danta ka leh dagaalka. Miyuu jiraa maanta qof Somali ah oo doonaya dagaalkan sokeeye inuusan soo afjarmin? Jawaabta waa Maya, haduuba jirose (oo dhici karta) waa mid u kiraysan quwado shisheeye oo dan gaar ah ka leh burburka Somaliya. Sidaa darteed in lagu mashquulo kooxahaa aan soo tilmaanay oo laga codsado inay dagaalka dhexdooda ah joojiyaan oy shacabka masaakiinta ah u turaan, waxay la mid tahay qof Damiir kutub lagu raray weydiinaya masala diini ah.
Arinta uu caalamka wada ogsoon yahay maanta waa damaca Itobiya ay ka leedahay Somaliya oo aanay qarsanaynin. Si Itobiya u gaadho hadafkeeda ah in laga waayo khariidada caalamka wax la yidhaahdo –Somali Republic- waxay adeegsanaysaa siyaasadii isticmaariga ee ahayd –Qaybi oo xukun (Divide to Rule). Umaba baahna caqli badan iyo aqoon siyaasadeed inuu leeyahay qofka doonaya inuu ogaado siyaasadda Itobiya ee ku aadan Somaliya. Laga soo bilaabo maalintuu Col. Cabdulaahi Yusuf u cararay Itobiya ee Mingisto uu ku soo dhaweeyay Adisababa ilaa maanta arimaha Somliya waxaa maamula oo gacanta ku haya sirdoonka Itobiya. Hadafka ugu dambeeyana waa midkaa aan soo sheegnay ee ah in aanay Jamhuuriyad Somaliyeed dib dambe u dhalan. Laba mid umbay Itobiya ku qancaysaa. Inay gabi ahaan Somaliya la wareegto oo lagu daro khariidada Itobiya marka caalamka uu ka quusto arimaha Somaliya iyo inay ka samayso 5 ama 6 maamul goboleed (Kilil), oo mid walba ay Itobiya maamusho.
Waxaa laga yaabaa inuu qof yidhaahdo, waan garanay inay Itobiya samaysay oy maamusho xukuumadda KMG ee Sh. Shariif, kooxda SWJ, maamulada SL iyo PL iyo kuwa kalee ku hoos naban, laakiin shabaabka oon ogsoonahay dagaalkii dhex maray iyaga iyo Itobiya iyo cadaawadda ka dhexeysa miyaan odhan karnaa danaha Itobiya ayay ka shaqaynayaan. Jawaabta oo kooban waxaa weeye midka sida tooska ah ugu xidhan ee la ogsoonyahay inuu yahay camiil u shaqeeya cadawga ayaa ka dhow oo arintiisa la xallin karaa midka isagoon ogsoonayn u fulinaya cadawga danihiisa. Waxaa la sheegaa waagii ay SSDF la dagaalamayeen ciidanka Somaliya inuu taliyihii watay ciidanka SSDF damcay inuu waribixin siiyo sargaalkii Itobiya ee qaabilsanaa arimahooda. Markuu yidhi intaas ayaan ka dilnay cadawga anagana intaa ayaa naga (shihiiday) ayuu Amxarkii ku yidhi isku daroo imisa dhimatay maanta?
Laba dhibaato ayuu gaystay falkii Muqdisha ka dhacay shalay.
1- dad shacab ah oon waxba galabsan ayaa lagu baabi’yay.
2- magac islaam ayaana loo adeegsaday dambigaa taasoo sharaf dhac ku ah magaca Islaamka.